ကဲ…နံကြားထောက်ပြီးရွေးပေးပါအုံး… Best web awards | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Best Web Awards » ကဲ…နံကြားထောက်ပြီးရွေးပေးပါအုံး… Best web awards	17
ကဲ…နံကြားထောက်ပြီးရွေးပေးပါအုံး… Best web awards
Posted by အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် on Jan 5, 2015 in Best Web Awards, Creative Writing, Myanmar Gazette | 17 comments
ကောင်းမွန်မှုကား ရေနှင့်တူလှ၏ ။
လူအပေါင်းတို့ မထီမဲ့မြင်ပြုသော နေရာများသို့
မညည်းမငြူ သွား၏ ။
အနီးစပ်ဆုံး သဘာဝရှိချေမည် ။
အိမ်၏ကောင်းမွန်မှုသည် မြေ၌တည်သည် ။
အချိန်အခါ ဆီလျှော်မှု၌တည်သည် ။
ထို့အတူပင် ကျင့်စဉ်တော်၏ ကောင်းမွန်မှုသည်
ပန်းတိုင်ဖြစ်သော ငြိမ်းချမ်းခြင်း၌တည်သည် ။
မည်သည့်အခါမှ ပန်းတိုင်မှမသွေဖည်ချေ ။
( ဆရာသက်လုံ ၏ စေ့ထားသောတံခါးများစာအုပ်မှ)
ဒါလေးကတော့ ခုတလောပြန်ဖတ်ဖြစ်နေတဲ့ ဆရာသက်လုံရဲ့ စေ့ထားသောတံခါးများစာအုပ် ပထမတွဲထဲက
၈-ပုဒ်မြောက် စာစုလေးဖြစ်ပါတယ်။ ပြောရရင်တော့ တရုတ်လူမျိုးတို့၏ ရှေးဟောင်းကျမ်းကြီးတစ်ဆူဖြစ်သော
“တောက်တယ်ကျင်း” ခေါ် ဆောက်တည်ရေးကျင့်စဉ်တော် ကျမ်းကြီးထဲက တစ်ပိုဒ်ပေါ့….များသောအားဖြင့်
တောက်တယ်ကျင်းမှ စာပိုဒ်တော်တော်များများမှာ တင်စားမှုများ အလိန်အ၀ှက်များ ဖြင့်ရေးသားထားသဖြင့်
စာဖတ်သူအနေနှင့် ရုတ်တရက် အလွယ်တကူနားမလည်နိုင်ဖြစ်ရပါတယ်…သို့သော်..ကျုပ်အခုရေးပြခဲ့တဲ့
၈-ခုမြောက်စာပုဒ်ကတော့ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးရေးထားတာဖြစ်လို့ ဖတ်လိုက်တာနဲ့အလွယ်တကူဆိုလိုရင်းကို
ရွာသူားတို့တွေးဖို့ နှစ်သစ်လက်ဆောင်လေးပေါ့ ..
တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု၌တည်သည် ။” ဆိုတဲ့ဟာလေးပိုသဘောတွေ့မိတယ်……
ဒီနေ့ခေတ်ကာလ ကျုပ်တို့ တိုင်းပြည်ကြီးမှာ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရှိပါရဲ့လား….တရားမျှတမှုရော
ဘယ်အဆင့်ရောက်နေပါသလဲ…..အစိုးရတစ်ရပ်ကို ဒီပေတန်နဲ့တိုင်းတာကို ကျုပ်တော့သဘေကျတယ်ဗျာ
တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရှိ ဖို့ရာ နိုင်ငံ ဆင်းရဲတာ ချမ်းသာတာ နဲ့မဆိုင်ပါဘူး…လုပ်လို့ရပါတယ်…
တကယ်တော့…ဒီကိုလာရင်းကိစ္စက..ဒီလိုပါဗျ…ကျုပ်တို့ မန်းဂဇက်ချစ်သူများ စာပေ၊ ကဗျာဆုပေးပွဲနဲ့ ရွာသူားများ တွေ့ဆုံပွဲကို
နောက်လာမဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ (၁၁-၁-၂၀၁၅)နေ့မှာ ကျင်းပကြတော့မှာဆိုတော့
ဖတ်ရွေးအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့ ၂၀၁၄ နိုဝင်ဘာလနဲ့ ဒီဇင်ဘာ နှစ်လအတွင်းရေးခဲ့ကြသမျှထဲက
အကြိုက်ဆုံးရွေးခဲ့ကြရာမှာတော့…အဓိကဆန်ခါတင်အဖြစ် (၉) ပုဒ်တိတိရွေးထုတ်မိာကပြန်ပါသဗျို့….
၁။အသဲ ကွဲပါစေ – ဘီ(လ်) နှင့် မီလင်ဒါ ဂိတ်(စ်) တို့၏ ၂၀၁၄ ခုနှစ် စတင်းဖို့(ဒ်) တက္က္ကသိုလ် ဘွဲ့နှင်း မိန့်ခွန်း – မြစပဲရိုး
၂။ သူမနဲ့အိမ်မက် – La Yeik
၃။ ဆားလေး တပွင့်နှစ်ပွင့် – padonmar
၄။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ စက်ဝိုင်းများ (1) & (2) -မြစပဲရိုး
– Mr. MarGa
၆။ အားကျမိတဲ့ အမေရိကန်တယောက်
၇။ အမှောင်ခေတ်မှာ ကြောင်ဖြစ်လာ Darkness
၈။ အပူပင်မဲ့စွာ စာသင်ခွင့်ရကြပါစေ
နှစ်သစ်အခါသမယမှာ ရွာသူရွာသားအားလုံးကျန်းမာချမ်းသာစွာနဲ့ ကောင်းကျိုးလိုအင်ဆန္ဒများပြည့်ဝကြပါစေ။
ခင်ဇော် says: ထောက်စရာ နံက အသားတွေ အောက် ပျောက်နေလို့
kyeemite says: .သိုင်းကျူးပါ လူမိုက်ခင်ဇော်ရေ… .ကျုပ်ပို့ထဲက ဇကာတင်စါရင်း ဘိုဖစ်တယ်မသိ မညီမညာနဲ့..တောက်စ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 5021
Mr. MarGa says: ဘယ်နေ့အဖြေတိုက်ကြမလဲဗျို့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14409
kai says: တကယ်ကို နံရိုးထောက်ရွေးရမယ့်ပုံပဲ..
လူမှာ နံရိုး ၂၄ချောင်းရှိတာ…။ တဖက်..၁၂ချောင်း…။
နံရိုးထောက်ထည့်လိုက်တာ… နံပါတ်၁၁ ရတယ်..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8413
Ma Ma says: ဆန်ခါတင်စာရင်းက ၉ ကို စိတ်ထဲမှာမှတ်၊
ပိုစ့်ပိုင်ရှင်ကို ၁ ထည့် ပေါင်း
အင်းးးး ၁၁ ခုမြောက်ဆိုတော့ကာ…..
ဒီတခါ ဆုပိုင်ရှင်က သဂျီးဖြစ်ရမယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 997
kotun winlatt says: ခစ်ခစ် နံရိုးထောက်ပီးးရွေးတာပဲ လူက ဝလာတော့ နံရိုးမထောက်မိဘူးးဖြစ်နေတယ် ဘလိုလုပ်မလဲ
Maung Thura says: ဒါနဲ့… ပိုစ့်ထဲက …ပုံက ဦးကြီးမိုက်လား ဟင်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4812
မွသဲ ( 17082011 ) says: ခိခိ အပေါ်ကပြောတဲ့အတိုင်းပဲ နံကြားထောက်ဖို့နံရိုးပျောက် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7169
kyeemite says: .အင်း…နံရိုးပျောက်တဲ့သူတွေတယ်ပေါလာပါလား Maung Thura says:
ဒါနဲ့… ပိုစ့်ထဲက …ပုံက ဦးကြီးမိုက်လား ဟင်…….အမှန်ပဲကွ
kai says: အာဒမ်ရဲ့..နံရိုးကနေ.. ဧ၀ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့…
ဧ၀ပျောက်နေတာလား.. ? Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1191
Kaung Kin Pyar says: Post အကုန်လုံးက ကောင်းကွက်တွေရှိတာချည်း….
Yae Myae Tha Ninn says: တားကို ရွေး… တားကိုရွေး… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1350
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .နံကြားမထောက်ဘဲ စာဖတ်ကြည့်ပြီး ကြိုက်မိတာကတော့ အန်ကယ်ကြောင်နဲ့ လယ်သမားကြီး ရာမည။ အန်ကယ်ကြောင့်စာထဲက စာလုံးပေါင်းတွေကိုတော့ ဘယ်လိုတွေးယူရမလဲ မသိတော့ဘူး။
မြစပဲရိုး says: စန္ဒရား တင်ဝင်းလှိုင် လို ဒဲ့ထိ အောင် ကျေးဇူးတင်စကား ပြောမဲ့ သူ ရပါစေသား။
မပြောရင်တော့ အဲဒီ အကယ်ဒမီ ကို ပြန်သိမ်း မယ်ပြောပါ။
PS – နံကြား ထောက်လိုက်တာ အကင် နံ့ ထောင်း ကနဲ ထွက်လာတယ်။
ဘာ ကို ဘာဘီကျူး ရမလဲ မသိ။
kyeemite says: .တော်လိုက်ကြတာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4010
manawphyulay says: နံရိုးထောက် ရွေးမလို့ပဲ နံရိုးတွေနာနေတော့ ထောက်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ ဘိုလိုလုပ်ရပါ့
Kaung Myat Thu says: ဦးနှောက်အစားမခံပါနဲ့ဦးကြီးမိုက်ရယ် စာရင်းထဲကလူရွေးဖို့ခက်ရင် စာရင်းထဲမပါတဲ့ Kaung Myat Thu ရဲ့